ဖန်မျှင်ထည်ပြတင်းပေါက်မျက်နှာပြင်ပြုပြင်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ - တရုတ် Wuqiang ကောင်တီ Huili ဖန်မျှင်ထည်
ဖန်မျှင်ထည်ပြတင်းပေါက်မျက်နှာပြင်ပြုပြင် patch ကိုလည်းဖန်မျှင်ထည်မျက်နှာပြင်ပြုပြင် Kit, ကိုယ်ပိုင် Stick မျက်နှာပြင် Patch, screen ကိုပြုပြင် patch ကို, ဖိုက်ဘာမှန်မျက်နှာပြင် patch ကိုအမည်ဖြင့်မှည့။
ကော်ပြတင်းပေါက်ဖန်သားပြင်သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်တံခါးများအတွက်ပေါက်တွေနဲ့မျက်ရည်ပြုပြင်ဖို့အသုံးပြုဖိုက်ဘာမှန်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများကျောထောက်နောက်ခံ။ အဘယ်သူမျှမ tools များလိုအပ်သည်။5Pack ကိုပစ္စည်း: ဖန်မျှင်ထည်အရောင်: မီးသွေးကိုယ်ပိုင်မျက်နှာပြင်ပြုပြင် patch ကိုရောကျကပ်:3"အကျယ်: 3" အဘယ်သူမျှမ tools များလိုအပ်ပြတင်းပေါက်ဖန်သားပြင်သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်တံခါးများအတွက်ပေါက်တွေနဲ့မျက်ရည်ပြုပြင်လေ့ရှိတယ်။ Carded ။
တစ်စုတ်မျက်နှာပြင်ကို fix လုပ်နည်း
1: အပေါက်မှထွက် Cut
တစ်ဦး straightedge နှင့်ချွန်ထက် utility ကိုဓားသုံးပြီးမျက်ရည်ယိုပတ်ပတ်လည်စတုရန်းအပေါက် Cut ။ တတ်နိုင်သမျှအသေးစားတွင်းသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်အနည်းဆုံး 1/2 စွန့်ခွာ။ ဟောင်းများကိုမျက်နှာပြင်၏သတ္တုဘောင်ဘေးမှာ။
2: patch ကိုအပေါ်ကော်
သောရင်ခွင် 1/2 လိမ့်မည်ဖိုက်ဘာမှန်မျက်နှာပြင်၏တစ်ဦး patch ကိုဖြတ်ယူပါ။ တစ်ဦးချင်းစီအစွန်းကျော်။ အဆိုပါလုပျခှငျမှကပ်ကနေကော်စောင့်ရှောက်ဖို့ပြတင်းပေါက်မျက်နှာပြင်အောက်မှာဖယောင်းစက္ကူအိပ်လေ၏။ ယင်းအပေါက်ကျော် patch ကိုအဓိကထားတွင်းန်းကျင်ကော်တစ်ပုတီးလျှောက်ထားများနှင့်တစ်ဦးအပြားသစ်သားချောင်းကိုသုံးပြီး patch ကိုများနှင့်ပြတင်းပေါက်မျက်နှာပြင်ကနေတဆင့်ကော်ပြန့်နှံ့။
သင်ခြင်သည်သင်၏ခေါင်းကိုပတ်ပတ်လည် buzzing နှင့်သင်ညဉ့်လုံးနိုးစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတူတက်တိုက်ကျွေးနေလျှင်, ဘယ်လိုမျက်နှာပြင်ကိုပြုပြင်တာတွေကော? အဆိုပါမျက်ရည်ယိုကြီးမားသည်သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်အလွန်မြင်နိုင်ဧရိယာထဲမှာဖြစ်ပါသည်, တစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြင်ကိုအစားထိုးမယ်ဆိုရင်ဒါ Patch ကို, မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့်တစ်နည်းနည်း tacky ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မိနစ် 20 ယူ. ရုံအပေါက် patch ။
သင့်ရဲ့ screen ကိုဖိုက်ဘာမှန် (ကထည်များကဲ့သို့ခံစားမိပါလိမ့်မယ်) ဖြစ်ပါသည်လျှင်, ဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးဆိုင်သို့မဟုတ် home စင်တာမှာလိပ်ကိုပယ်သစ်ကိုဖိုက်ဘာမှန်စိစစ်၏။ 1/2 ပေမဝယ်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်မျှသော cutoffs အဘို့အမေးပါ။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးရော်ဘာ-based ကော်သို့မဟုတ်စူပါကော် ​​Gel ဖြစ်စေကောက်။ ထိုအခါသင်သည်ရှင်းလင်းသော cutout (ဓာတ်ပုံ 1) ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကောင်းတဲ့-ရှာဖွေနေပြုပြင်ဖို့ key ကိုလုပျခှငျဆန့်ကျင်တင်းကျပ်စွာ straightedge ကိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဓါတ်ပုံများ 1 နှင့်2လိုက်နာပါ။
သငျသညျသေးငယ်တဲ့အပေါက်နဲ့လူမီနီယံမျက်နှာပြင်ရရှိပါသည်လျှင်, ဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးဆိုင်သို့မဟုတ် home စင်တာမှာ patch ကိုကိရိယာအစုံကိုဝယ်ကြလော့။ ဒါဟာအများအပြား precut 1-1 / 2-in ကိုမဆံ့မည်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်ကိုတိုက်ရိုက်စွဲစေကြောင်း preformed ချိတ်နှင့်အတူပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ။